Doodii Xisbiyada dalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Doodii Xisbiyada dalka
La daabacay måndag 7 maj 2012 kl 10.43
Habeynkii axada ee xalay ayaa markii ugu horaysay u gudoomiyaha xisbiga sooshiyaal dimuquraadig Stefan Löfven ka qayb qaatay doodii ugu horeysay ee hogaamiyayaasha xisbiyada siyaasada, halkaas oo u kula kulmay gudoomiyaha xisbiga talada haya markii ugu horeysay, mawduuca doodan ugu muhiimsanina wuxu noqday shaqada.
Stefan Löfven ayaa aad u dhaleeceeyay dawlada mawqifkeeda ku aadan shaqo la’aanta, halka gudoomiyaha xisbiga talada haya Reinfeldt weerar isna ku qaaday xisbiga sooshiyaal dimuquraadiiga sheegayna in aanay haysan haba yaraate wax qorshe ah oo xisbiga sooshiiyaal dimuquraadigu haysto ina aanay jirin.
Doodan ayaa waxa qabtay TV-ga wayn ee SVT qaybtiisa Agenda.
Raysal wasaaraha dalkan Sweden, Reinfeldt ayaa weerarkiisa ku bilaabay:
- Ii macne sidaad u fikiraysaan ee ay macquul u tahay in aad laba laabtaan caashuurta caymiska dad gaadhaaya 550 000 qof oo shaqeeya kana yar da’ada 26 , ii macnee sida arinkaasi u shaqo u abuuri karo. Iga dhaadhici sidii ay macquul u noqon lahayd dalacaada cayimska makhaayadaha ee ay u caawin lahayd dhalinta iyo dadka ka soo jeeda dalka dibadiisa.
Ma kuwaasa ah qorshayaal shaqo lagu abuuri karo dalkan Sweden ayuu ku soo jaray doodiisa Reinfeldt isagoo hadalka ku tuuraya gudoomiyaha xisbiga sooshiyaaldimuquraadiga Stefan Lövfven.
Gudoomiyaha xisbiga (s) ayaa markiiba u jawaabay:
- Sidaan adiga iyo aniguba ognahay siyaasadan aad samayseen waa ta maanta ina dhigtay xaalada aan ku jirno. Hadda waxaynu haysanaa in ku dhaw 400 000 kun oo shaqo la’aani haysato, saaso ay tahayna aad haysataan siyaasadiina sheekada ah, marka laga hadlayo sidaad idinku wax iskaga dhaadhiciseen, ayuu ku jawaabaay hogaamiyaha xisbiga sooshiyaal dimuquraadigu Stefan Lövfven.
Doodan ayaa cirka isku shareertay markii la guda galay dooda ku saabsan qumbuliyada abuurta korontada, gudoomiyaha xisbiga (s) Lövfen ayaa soo jeediyey qorshe ah in xisbiga u gudoomiyaha ka yahay ee (s) iyo xisbiyada talada hayaa ay miiska wada fadhiistaan oo ay isla meel dhigaan arinta qumbuliyada korontada.
Balse gudoomiyaha xisbiga Mudaraatka Fredrik Reinfeldt iyo xisbiyada garabkiisa ayaa weerar ku qaaday gudoomiyaha xisbiga (s) maadaamo oo u hore u haystay fikir ah in la sameeyo qumbuliyada korantada balse hadda u ku eegyahay fikirka xisbiga sooshiyaal dimuquraadiga ee ah in aan la dhisin qumbuliyad cusub kuwa jirana la baabiiyo, taaso keenaysa in aanu gudoomiyaha xisbiga (s) hadalkiisu cadayn.
- Ka jawaab suaalaha asalka ah oo noo sheeg waxaad ka aaminsantay qumbuliyada korontada dhalisay, ayuu suaalay raysalwasaaruhu gudoomiyaha xisbiga (s)
Löfven ayaa ku jawaabay:
- Waxaanu haysanaa mawqifka go’aanka ee xisbigu ku gaadhay kulankiisa, waanu burburinaynaa qumbuliyada korontada laakiin ma samaynayno waligeen haddii aan suuqa warshadahu aanu ka maarmi karin, ayuu ku jawaabay Löfven.
- Markaas ma waxaad leedahay waa laga dhisi kara dalkan Sweden ayuu waydiiyey raysal wasaare Reinfeldt.
- Haddii aad hadalka ii daysid ayuu ku jawaabay ..., Löfven.
- Haa laakiin ka jawaab suaashan xiisaha leh ayuu raaciyey raysal wasaaruhu, kuna daray waa suaasha asalka ah ee ka jawaab.
Intii ay doodani socotay ayaa waxa soo baxday su’aasha ah in hubka dalkan Sweden ka iibiiso dalalka sida Sacuudi Areebiya oo ah dal maamulkiisu yahay mid dikteeytar ah.
Balse labada xisbi ee ugu waawayn dalkan Sweden waa Mudaraatka iyo xisbiga Sooshiyaaldimuquraadigu isku raacsan yihiin in hubka la iibiiyo balse la xadiido habka iyo wadamada hubka laga iibinayo.
Dhanka kale xisbiga cagaarka ah ee Miljöpartiets gudoomiyihiisa Gustav Fridolin ayaa sheegay in aanay Sweden caawinin wadamada dadkooda cadaadiya isagoo ka waday dalka Sacuudi Areebiya. Halka gudoomiyaha xisbiga bidixda ee Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt ku tilmaamay arinkan mid munaafaqnimo ah.
Hogaamiyaha xisbiga cagaarka Gustav Fridolin ayaa ka hadlay in la maal galiyo wadooyinka tareemada, marawxadaha dabka dhaliya iyo in la cusboonaysiiyo Enerjiga,
Tusaalana u soo qaatay wadanka Jarmalka.
Xisbiga bartamaha ee Centerpartiets ayaa gudoomiyahooda Annie Lööf difaacday qorshaha dawlada ee la xidhiidha isticmaalka Enerjiga, sheegtayna in ay dawladu samaysay qorshayaal badan oo wacan kana fiican wadamo badan oo ku jira qaramada isu taga yurub.
Dooda oo sii kululaanaysay marba marka ka danbaysa ayaa gudoomiyaha xisbiga bidixda Jonas Sjöstedt dawlada ku dhaleeceeyay lacagta cashuurta ah ee ay ka dhimeen makhaayadaha sheegayna in ay dawladu awooda saarto maalgalinta wadooyinka tareemada iyo cimilada.
Balse waxaa isla markiiba ku soo booday gudoomiyaha xisbiga Folkpartiets Jan Björklund oo sheegay in ay xisbiga bidixdu ku kacayaan balamo aan loo hayn maalgalin.
(- Ma waxaad u malaynaysaa in aanu wakhtigan adag ee lagu jiro isku dhaafino in aan cunto ka dharagno madaamo aad naaquusteen cashuurta makhaayadaha, waxaan u malaynayaa in aan maal galino dhisida wadooyinka tareemada , dhisida guryo cusub, iyo in wax la baro dadka bila shaqada ah si ay u qaataan shaqooyinka jira, ayuu sheegay gudoomiyaha xisbiga bidixda ..Sjöstedt.
Mar labaad ayaa waxa hadalka la booday gudoomiyaha xisbiga Folkpartiets Jan Björklund oo ka jawaab celinaya hadalka gudoomiyaha xisbiga bidixda.
- Hadda doodu waxay socotay 25 daqiiqo, gudoomiyaha xisbiga bidixdu wuxu balan ku qaaday 25 milyaard oo maal galin ah, sug inta ay doodu socoto 100 daqiiqo ayuu yidhi gudoomiyaha Folkpartiet Jan Björklund.
Waxa kale oo laga hadlay caymiska.
Mucaaradka ayaa soo jeediyey qorshayaal badan oo la xidhiidha caymiska, siiba sidii loo kordhin lahaa caymiska laga jaro dadka maalkoodu dhaafsanyey xaduudka.
Balse gudoomiyaha xisbiga (s) ayaa ku eekaaday hadalkiisii hore ee ahaa in ay raali ku yihiin nidaamka cashuurta caymiska ee dawlada.
Sidii caadada u ahayd xisbigi cunsuriyiinta ee Sverigedomuquraadiga ayaa hogaamiyahooda Jimmie Åkesson sheekada u duway in ay dhibtu ka jirto dadka ajaahnimka ah ee degen dalka. Halkaaso aan la sii daba galin hadalka ka soo yeedhay Jimmy Åkesson.
Jimmy ayaa amaan u jeediyey gudoomiyaha xisbiga Folkpartiet, isago soo qaadanaya waraysi hore loola yeeshay Björklund oo ahaa in dhalaanka ajahanimku ay sabab u yihiin natiijooyinka xun ee iskuulaadka, balse markiiba Björklund ayaa jawaab kulul u celiyey Jimmy Åkesson
- Sheekadaada aniga ha igu dhex darin ayuu ugu jawaabay Jan Björklund ninka hogaanka xisbiga cunsuriyiinta hogaamiya Jimmy.
Raaciyeyna in xaalada ajahanimku ay isbadashay wakhtiyadan dambe maadaamo dadka wadanka soo gaala aanay ahayn qaar haysta waxbarsho sare.
Isha: Ekot/P1 Morgon/Svt